ကိုပေါရဲ့ ပိတောက်ရိပ်၊ Ko Paw's Padauk-Yeik: “အာရှရဲ့ ဖရိုက်ဒေးများအကြောင်း(ဒုတိယပိုင်း)”
Suharto's rise to power was full of blood. Nights were full of dreaded red lantern days, where islamists who were eager to pay back revenge at the communists who were powerful under Sukarno (tri support system made up of Islamists, Army and the Communists). At nights, villages or paddy fields were full of interrogators and interceptors who with lanterns and swords stopped all passers by or residents of the host villages, victims were asked to cite Koran and if they cannot they were killed. It happened that most of the Indonesian Communists and ethnic Chinese (who are not Muslims) cannot cite Koranic verses. Army did not intervene and so mullahs and thugs killed more thanamillion. It was ethnic cleansing in the name of God. Did your Dr. Chee mentioned that? Perhaps not as he relied on Malays and Indian muslims vote to sustain life for the opposition.
လာအုန်းမယ်ဆိုတော့လဲ ဖတ်အုန်းမယ်ပေါ့ဗျာ။ သွက်သွက်တော့လုပ်ဗျ။ အဆက်ပြတ်ပြတ်သွားရင် အရသာပေါ့မှာစိုးလို့။
ပြီတော့ အာရှမြေပေါ်မှာ မွေးခဲ့တာ...
အခုချိန်ထိ ချစ်နေဆဲ..လွမ်းနေရဆဲ မြန်မာပြည်ဆိုတဲ့ အဲဒီမြေမှာ မွေးခဲ့တာပေါ့..
အဖိနှိပ်ခံဘဝတွေထဲက ကိုယ့်တာဝန်ကိုယ်မကျေသေးဘူးလို့ ခံစားနေရတဲ့ ဖရိုင်းဒေးမှာမွေးခဲ့တဲ့သူတယောက်ဆိုပါတော့ ကိုပေါရေ....
ကိုပေါ... PDF လုပ်ပြီး keep ထားလိုက်ပြီ။ နောက် ဆက်ရန်လေးတွေ စောင့်မျှော်နေပါတယ်။ ကျေးဇူးတင်အရမ်းတင်ပါတယ် ကိုပေါ...
ဖတ်လို့ကောင်းတယ်ဗျာ ... စောင့်ဖတ်နေဦးမှာပါ။